Date My Pet » Top 5 Chick Flick Movies Fa Tia
Fa tsara ny vehivavy ..., izany no Patrick Swayze. Tokony lazaiko intsony? Fa ny ry zalahy, dia manana tantara mahaliana, tantara an-tsehatra, LASA mahaliana, famitahana, ary ny sasany kosa sary mampihomehy nomen'ny Whoopi Goldberg. Ary ny fiafaran'ny tsy azo nikapoka! Ataovy azo antoka ny fananana ny Kleenex eo amin'ny tanana mba ho maina ireo ranomaso.
NY mpiaro ny mpanjaka
"Ity oldie, fa goodie "manasongadina Kevin Costner sy ny faramparan'ny Whitney Houston. Mitantara ny tantaran'ny iray "Diva" fiainana mpanakanto izay no nandrahona ny iray amin'ireo "mpankafy", ary taorian'izay dia ho voatery hitondra amin'ny "mpiaro" mba hiaro azy. Enter Kevin Kostner. Ankoatra ny maha-pitiavana, sarimihetsika izany no tsara voasoratra, savvy, ary feno ny asa. Efa nomeko 5 kintana ho fialam-boly danja! Ary ianao koa ho.
Ianao tia ny fifandraisana sy ny "firahalahiana" tsara tarehy ity nandatsaka, mampiseho Morris Chestnut, D, L. Hughley, Bill Bellamy, ary Shemar Moore. Ity ny 4-1-1: mandritra ny fiainana efatra namana miatrika ny fifandraisany olana, dysfunctions, ary ny fiainana ny zavatra hita. Saingy mihoatra noho izany. An'ny fianakaviana izy ireo fanamby, miatrika ara-poko sy ny lahy sy ny vavy miompana fitsaratsaram-poana, ary betsaka kokoa manontolo. Tena mampihomehy, sexy, ary mahay. Ary izany resaka lehibe Starter ... raha ho izany ianao.
Biby NY BAOLINA
Roger Ebert antsoina hoe izany, "Best sarimihetsika ny taona!"
Ity sarimihetsika iray manontolo dia manome famaritana vaovao ny fifandraisana toerana: "Manahirana."
Dia Stars Halle Berry, Billy Bob Thornton, ary Heath masiaka natao tamintsika. "Ball" dia milaza ny tantaran'ny nifanohitra, tezitra mpiambina fonja izay lasa tafiditra amin'ny vadin'ny lehilahy iray dia mipetraka eo ambanin'ny ny famantaranandrony. Izany sary, manta, riveting, ary layered. Ny nampihetsi-po Berry Azontsika ny "Leticia" nahazo azy ny Academy Award eto. Fantaro hoe inona ilay "resabe" dia ny.
Inona no mahazo rehefa mitambatra James Earl Jones, Diahann Carroll, enina ankizy, ary ny fifanampiana mpiasa? Entana, miantso ny fihomehezana, fitiavana, ary mihalehibe, (ary tsy ny ankizy).
Ankoatra ny maha hugely voly, dia manana hira lehibe ny Groove ny, natolotry ny Gladys Knight. Tandremo sao tsy mahita izany!
Manonofy ao Libro: Fomba tambatambazana Dog Tsara A Bad Vehivavy